कसरी एक मनिटर चयन गर्न?
तपाईं यहाँ: घर सुझाव कसरी एक मनिटर चयन गर्न?
आजको संसारमा, हाय, अक्सर अनावश्यक विकिरण आफूलाई जोगाउन तरिका र तपाईंका प्रियजनहरू को एक विविधता छ. तर यो एकदम गाह्रो छ, किनभने यी रेज अदृश्य र imperceptible छन्. एक घरेलू वातावरणमा उपस्थिति र गतिविधि मात्र मापन गर्न सक्छ घरेलू dosimeter को.
स्वास्थ्य गर्न खतराको मा, जो उच्च विकिरण संग क्षेत्रमा बारम्बार रहन सामना सक्छ, बोल्न डर. त्यसैले आफूलाई बचाउन र यसलाई आफ्नो परिवारलाई जोगाउन राम्रो छ.
Dosimeter घर - एक एकदम सरल उपकरण, Geiger काउन्टर द्वारा संचालित. यो हावा पृष्ठभूमि विकिरण उपाय, उत्पादनहरु, विभिन्न विषयहरू. आफ्नो डाटा अत्यधिक सही छ, घर पर्याप्त छ मा तर यसको प्रयोग. यसबाहेक, यो मानिस-साधारण बुझ्न एकदम सरल छ.
तपाईं ध्यान के गर्नुपर्छ, घरेलू dosimeter टिप्न?
तपाईं स्पष्ट हुनुपर्छ, यो उपकरण प्रयोग गरेर.
सेन्सर संख्या र प्रकार नोट. यो उपकरण संवेदनशीलता निर्भर.
उत्पादन गुणस्तर को उपयुक्त प्रमाणपत्र सँगसँगै हुनुपर्छ.
उपकरण संकुचित र सुविधाजनक हुनुपर्छ, त्यसैले कुनै पनि समस्या बिना यसलाई लाग्न सक्छ.
उपलब्ध वैकल्पिक कार्यहरु, जो मापन सरल हुनेछ.
यो उपकरण प्रयोग गरेर?
Dosimeter घर एकदम सञ्चालन गर्न सरल छ, यसलाई प्रयोग गर्न सिक्न सजिलो छ.
ध्यान, यो यस्तो उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ:
कोठा मा या सडक पृष्ठभूमि विकिरण को मापन;
खाद्य पदार्थ मा रेडियोयाक्टिभतत्वकोरङचयनगर्दछ जाँच उपलब्धता;
कुनै पनि वस्तु देखि रेडियोधर्मी विकिरण जाँच.
अघि, तपाईं अनुसन्धान सुरु, हामी याद गर्न आवश्यक, कि प्रकृति सधैँ वर्तमान प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण छ, आवश्यक र स्वास्थ्य को लागि हानिरहित छ. तर यसको अतिरिक्त जटिल नतिजा ले.
घरेलू dosimeter प्रयोग radioactivity को स्तर जाँच्न, पर्छ:
उपकरणमा गर्नुहोस्. एक नयाँ अध्ययन गर्न खुराक रिसेट, यदि आवश्यक.
तपाईं खुल्ला ठाउँ अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने (सडक, अदालत, कुनै पनि क्षेत्र), पालना, कि उपकरण soiled छैन त. कोठा - परीक्षण साइट भने, यसको स्थानहरु धेरै अनुसन्धान सञ्चालन - पर्खाल नजिक, केन्द्रीय, छत.
तपाईं वस्तु वा खाना उत्पादन अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, उपकरण रूपमा यसलाई सकेसम्म नजिक होल्ड. तपाईं बाहिर यी माप सीधा भण्डारमा वा बजार मा पूरा गर्न सक्छन्, सम्भावित खरिद अघि: यसलाई छिटो छ र यो एकदम सुविधाजनक छ.
यस्तो सानो कुरा तपाईंले अपरिहार्य सहायक हुनेछ.
आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो प्रियजनलाई सुरक्षित छ.
महिला सैलुन – कसरी चयन गर्न?